October 2021 – ZEUS Myanmar
Character Info COMIC Explain Marvel
No Comments on Carnage အကြောင်း
အရက်စက်ဆုံး သတ်ဖြတ်ရေး Symbiote(သို့မဟုတ်) Carnage အကြောင်း
Contentအရှည်မတင်တာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီတစ်ခါမှာတော့ Symbioteတွေထဲမှ Carnage နှင့် Host ဖြစ်သူ Cletus Kasadyအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွာပါမယ်ခင်ဗျာ။ Carnage ရဲ့comic ဘဝဇာတ်ကြောင်းတွေရယ် သူ့ရဲ့ main event ကြီးတွေနဲ့ အခြားသော detail များကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Venom:Let There Be Carnageဟာလည်းထွက်ရှိထားတာဖြစ်လို့ Carnage ရဲ့ အကြောင်းတွေကိုသိထားသင့်ပါတယ်။
read & share guys .
Carnage ကတော့ Venom နှင့် Spider-Man ရဲ့ Classic Super Villainကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းဆုံး symbioteတွေထဲက တစ်ယောက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
Carnage ကို David Minchelinie နှင့် Erik Larsonတို့နှစ်ဦးကဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Creators နှစ်ယောက်ဟာ Marvel Comics အပြင် DC, Image , Darkhorse Comics များတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့သူ‌တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Carnage ကို Amazing Spider-man#334 (Feb,1991) တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Carnage အနေနှင့် မိတ်ဆက်တာမဟုတ်ပဲ Host ဖြစ်သူ Cletus Kasady ကိုစတင်မိတ်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။
Amazing Spider-man#360 မှာ Carnageကြီးကို fully introduceလုပ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ထိုခေတ်ထိုအခါမှာကတည်းက Carnageဟာ Iconicဖြစ်တဲ့ psychopath Super Villain အနေနဲ့ comic fan တွေကြားမှာ နာမည်ကြီးပါပဲ။carnage အတွက် video game ‌အမြောက်အမြားပါထွက်ရှိထားခဲ့တာပါ။
ဒီတော့ carnage ရဲ့ မူလဇစ်မြစ်ကိုစတင်ဖတ်ရှုလိုက်ကြရအောင်။
Origin ပြောရရင် Cletus Kasady က ငယ်ငယ်လေးကတည်းက လူသတ်တယ်ဗျ။ဆက်တိုက်သတ်တယ်။
Cletusရဲ့ငယ်ဘဝကလှပမနေပဲ တော်တော်ကိုဘဝနာစုတ်ပြတ်နေခဲ့တယ်။အကြောင်းအရင်းအားလုံးကသူ့ရဲ့အမေဖြစ်သူဟာ သူ့ကိုမွေးပြီးပြီးချင်းမှာပဲဆုံးသွားရာကနေစတော့တာပါပဲ။သူ့အမေဆုံးပြီးနောက်မှာ Cletusဖြစ်သူဟာ အဖွားဖြစ်သူနဲ့နေခဲ့ပေမဲ့လည်းအဖွားက အမြဲလိုစကားနာထိုးတတ်လို့ အဖွားကိုပါ လှေကားကတွန်းချသတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။
အဖွားမရှိတဲ့နောက်မှာ အဖေဖြစ်သူရယ် step-mother နဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့ပေမဲ့ Cletus Kasady ရဲ့စိတ်အခြေအနေကပိုပိုဆိုးလာခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့ဆို Cletus ရဲ့အဖေဖြစ်သူဟာ အမြဲရိုက်နှက်ဆဲဆို‌‌နေတာကြောင့်ပါပဲ။
Cletus ရဲ့ Backup Story တွေကို နှောင်းပိုင်းမှာဖော်ပြလေ့မရှိပဲ အချိန်အတော်အတန်ကြာမှ တခြားcomic issue များမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
Cletus ရဲ့မိထွေးနဲ့အဖေဟာလည်း Cletusကို ရိုက်နေရင်း အဖေကမတော်တဆထိခိုက်ပြီးသတ်မိသွားခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေကလည်း Cletusရဲ့ အဖေဖြစ်သူကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သိပ်ဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့သားလေးကတော့ ဖခင်ဖြစ်သူဖက်က မျက်မြင်သက်သေ ရပ်တည်ခြင်းမရှိလို့ အဖေလည်းထောင်ကျသွားပါတယ်။
ဒီတော့ Cletusတစ်ယောက်မိဘမဲ့ဖြစ်သွားပြီး St.Estes Home For boys ဆိုတဲ့မိဘမဲ့ဂေဟာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။မိဘမဲ့ဂေဟာမှာလည်း ပြသာနာရှာပြီး မကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့ဆို နာကျည်းမုန်းတီးမှုတွေကြောင့်ပါပဲ။ သူချစ်နေတဲ့ ကောင်မလေးကလည်း သူကို break ခဲ့လို့ အရှိန်နဲ့လာနေတဲ့ Bus ရှေ့ကို‌တွန်းပြီးသတ်ပစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
အသက်အရွယ်ကြီးလာတာနဲ့ Cletus ဟာ ရက်စက်တဲ့ လူသတ်သမားအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီး ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့လူသတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်မှာ လူသတ်မှုများစွာကြောင့်Ryker Island ပေါ်က ထောင်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာကျဖို့ အတွက်ဖမ်းခံရခဲ့ပါ‌တော့တယ်။ဒါကတော့ Cletusရဲ့ Early Story လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Cletus ရဲ့ ထောင်ထဲမှာ‌နေရတဲ့ရက်စွဲတွေကသိပ်မကြာခဲ့ပါဘူး။carnage ထောင်ထဲရောက်နေတုန်းမှာ အခန်းဖော်ရရှိခဲ့တာက Eddie Brockကြီးဖြစ်ပါတယ်။ Venom နဲ့ Spider-manတို့ တိုက်ပွဲမှာရှုံးပြီးနောက်ထောင်နန်းစံနေရတာပါ။ Cletus နဲ့တူတူပေါ့။နှစ်ယောက်ကမတည့်အတူနေဖြစ်ပါတယ်။အမြဲလိုလိုလည်းစကားများရန်ဖြစ်လေ့ရှိသူပါ။
တစ်နေ့မှာ သူတို့နှစ်‌ယောက်တူတူစကားပြောနေတုန်းမှာ Cletus က Eddie ကို သတ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။ အဲ့အချိန်မှာပဲ Venom Symbioteက သံချောင်းပြုတင်းပေါက်ကြားကဝင်လာပြီး Eddieစီကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ Eddie ကလည်း Venom ကိုအသုံးချကာ ထောင်နံရံကိုခွဲပြီးပြေးကာလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
Cletus ကလည်း ထောင်ကနေလွတ်သွားတော့မှာပဲ။ဒါပေမဲ့ မထင်မှတ်ပဲဖြစ်သွားတာကတော့ နံရံအပဲ့တွေပေါ်ကနေ venom ရဲ့ web ကကျန်နေခဲ့ပါတယ်။
ထို web ဟာ Cletus ရဲ့လက်ကိုသွားထိပြီးနောက် မှာတော့ Cletus ရဲ့ DNA နဲ့ပေါင်းစပ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့် Cletus ရဲ့သွေးတွေထဲမှာ Venom ရဲ့ Web ဟာစိမ့်ဝင်သွားပြီး New Born Symbioteအသစ်ကိုဖန်တီးလိုက်ပါတော့တယ်။ CARNAGE ဆိုတဲ့အရာဟာ venom ရဲ့ web သေးသေးလေးရယ် Cletusရဲ့ သွေးတွေထဲကနေ မွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ Symbiote အမျိုးအစားပါပဲ။
Cletusတစ်ယောက် Symbioteရပြီးချိန်မှာတော့ Cletus ဟာ Venom ကို လိုက်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်။
ဒါပေမဲ့ သူနဲ့ပထမဆုံးရင်ဆိုင်တွေ့ခဲ့သူကတော့ spider-manပဲဖြစ်ပါတယ်။ Spider-Manဟာ Carnage နဲ့ပက်သက်ပြီးသတင်း‌တွေကိုနားစွံနားဖျားကြားထားပါတယ်။
Living skin ပုံစံနဲ့ သူကိုယ်သူ Carnageလို့ခေါ်တဲ့ လူသတ်ကောင်အကြောင်းပါပဲ။ဒါပေမဲ့ Spidey ကတော့ Carnageမှန်းမသိပဲ Venom ထောင်ကနေပြန်လွတ်တယ်မျိုးကိုတွေးနေခဲ့တာပါ။
Cletus Kasadyထောင်ထဲမှပြန်လည်လွတ်မြောက်သွားကြောင်းကို peter parkerတစ်ယောက်တွေ့တော့ researchလုပ်ကြည့်ရင်း peter ပါသွေးတက်သွားပါတော့တယ်။ 12လောင်းပြိုင်လူသတ်မှု အခြားသော ဒါဇင်ချီတဲ့လူသတ်မှုတွေအပြင် သူနေခဲ့တဲ့ မိဘမဲ့ကလေးဂေဟာကိုလည်း မီးရှို့ပြီးကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကိုပါ ‌ဦးခေါင်းခွံကြေမွသည်အထိ ထုသတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီတော့ Cletus Kasadyဟာ သိပ်ကိုရက်စက်တဲ့သူဆိုတာသိပြီးနောက်မှာ Peter Parkerဟာလည်း သူဘယ်လိုမကောင်းဆိုးရွားနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာမျက်ခုံးလှုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ spider-manတစ်ယောက်ညဖက်ကြီး crime fightingလုပ်ဖို့သွားရာကနေ တိုက်ပျက်ထဲမှာ Cletus Kasadyနဲ့ တွေ့ခဲ့ပါတော့တယ်။ Cletusကလည်း Spider-manလာနေတာသိလို့ စိန်ခေါ်ပြီး တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
First Round မှာတင် Carnage ဟာ weapon shaping abilityတွေ web တွေကို ထုတ်သုံးပြီး ချပါတော့တယ်။ spidey ကလည်း carnageမျက်နှာကို web နဲ့ပစ်ပေမဲ့ ဘာ effectသက်ရောက်မှုမှမရှိပဲ Spider-Manချည်းအချခံခဲ့ရပါတယ်။ spider-man ကလည်း ဒီလို power မျိုးတွေဟာ Venom နဲ့ဆင်တူနေကြောင်းကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။
Carnage ရဲ့ လက်ကို axe shape ပြောင်းပြီး လှမ်းပစ်ခဲ့ပါတယ်။ spidey ကရှောင်ပြီးနောက်မှာ Axe ကအခြားနေရာကိုမှန်ပြီး အမှုန်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ဒီတော့ ညဏ်ပြေးတဲ့ peter parker နောက်တစ်ခုသိလိုက်တာကcarnage ကိုယ်ကနေခွဲထွက်လာတဲ့ substanceတွေက Molecular intergrity တွေကိုထိန်းမသိမ်းထားနိုင်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့ပါတယ်။
တိုက်ခိုက်နေရင်းမှာပဲ third party အနေနဲ့ရဲတွေရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ Carnage ဟာရဲတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။peter ဟာလည်း carnageကိုတော်တော်အထင်ကြီးမိသွားပါတယ်။ဒီ battle ကိုသူတစ်ယောက်ထဲနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရမှဆိုတာသိတဲ့‌နောက်မှာ Venom ကိုခေါ်ဖို့လုပ်ပါတော့တယ်။
Spider-Manနှင့် Fantastic Four မှ Human Torch တို့ဟာ Eddie Brock ကိုသွားရောက်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ Eddie Brockက‌တော့ spider-manကိုတွေ့တွေ့ချင်းချတာပေါ့။ Human Torchကိုတောင်ရေထဲဆွဲနှစ်ပြီးသတ်ဖို့လုပ်တာပါ။
Spider-man ကနောက်မှာ symbioteအသစ်တစ်ကောင် New Yorkမှာသောင်းကြမ်းနေတယ်။ သူက Cletus Kasadyဖြစ်ကြောင်းကိုပါပြောလိုက်တော့ Venom ကလည်း မှင်သက်သွားပါတယ်။
ထို့နောက်မှာတော့ Cletus Kasady ကိုသာမတားရင်အပြစ်မဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှာကိုမလိုလားတာကြောင့် Cletusကိုတားဖို့ Venom နှင့် Spider-manနှစ်ယောက် မတည့်အတူနေ ဖြစ်ပေမဲ့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ Amazing Spider-man#363 မှာ Team Up ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Carnage ကိုနှစ်ယောက်သားတူတူနှိမ်နင်းဖို့သဘောတူညီဖို့ပြီး Carnagesကိုရှာပါတော့တယ်။ symbioteတွေရဲ့ Abilitiyတစ်ခုအရ symbioteတွေဟာသူတို့ရဲ့ web တွေ offspringတွေကို အာရုံခံနိုငိတာကြောင့် Venom နှင့် Spider-manဟာ Carnage ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြီး တိုက်ပွဲစတင်ပါတော့တယ်။ စစချင်းကတည်းက Venom ရော Spider-Manရော နှစ်ယောက်လုံးအသိပ်ခံလိုက်ရပြီး Carnageဟာသူတို့ထက်သန်မာတယ်ဆိုတာကိုပါ သတိထားမိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Carnage ဟာ အာရုံလွှဲပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။
နောက်တစ်ကြိမ်မှာ‌တော့ carnage ဟာ Mr.jonah ကိုဖမ်းပြီးနောက်မှာ stage performanceတစ်ခုကိုသွားဖျက်စီးပြီးခဲ့ပါတယ်။ spidey နဲ့ Venom တို့ကလည်း လိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မြေအောက်ရထားလမ်း‌တိုက်ပွဲမှာ spidey ဟာ Carnage ကို Volt အားတွေ ထောင်ဂဏန်းရှိတဲ့ လျှပ်ကူးလမ်း‌ပေါ်တွန်းထုတ်ခဲ့ပေမဲ့ Carnage ရဲ့ Skin ဟာခံနိုင်ရည်‌ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ အသံလွှင့်တဲ့နေရာကိုသွားကာ Venomနှင့် Carnage ချနေတုန်းမှာ Frequencyကိုအမြင့်ဆုံးထားပြီးလွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ venom က‌တော့ adult symbioteဖြစ်နေတော့ ခံနိုင်ရည်ရှိပေမဲ့ baby အနေအထားသာရှိသေးတဲ့ Carnage ကတော့ ပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတော့တယ်။
ဝါနုသေးတဲ့ Carnageလေးကတော့ကြွသွားပြီး Venom ကspidey ကသူ့ကို အကျင့်မကောင်းကြံတယ်ထင်လို့သတ်မလို့လုပ်တုန်းမှာ Reed Richards ဟာ Frequency Gun နဲ့ရောက်လာပြီး Venom ကိုတားခဲ့ပါတယ်။ Spider-man ကိုလည်းကယ်ခဲ့ပြီး Venom ကိုလည်း Mobile Restraint ထဲမှာဖမ်းပြီးခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ Carnage ရဲ့အဆုံးသတ်လား?
Cletus ဟာ Ravencroft ဆိုတဲ့ Supervillain Control Centre မှာအဖမ်းခံထားရဲ့ပါတယ်။
Ravencroft မှ doctor တွေက Cletus ရဲ့ DNA ကိုပြောင်းပြီး madness ကိုထိနိးချုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
Cletus ကိုယ်ထဲက Carnage ကတော့ ရှိနေပြီးထပ်မံထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ spider-manရဲ့ Venom တို့စီကို ထမ်မံပြန်ရောက်လာတော့မှာပါပဲ။
Carnage ဟာ New York ကိုစစ်ဆင်ဖို့ သူ့လိုမျိုး psychopath Super Villain Team ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။
Member တွေကတော့ Carnage,Demon Goblin , Carrion , Shriek , Doppelgangerတို့ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီ super villain team ကို Spidey နှင့် Black Cat , Venom တို့ Team Up ပြလုပ်၍တိုက်ခိုက်ပေမဲ့လည်းအနိုင်ရယူဖို့တော်တော်ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ Cletus ဟာ တော်တော်ကိုသန်မာနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း နောက်ဆုံးမှာတော့ ရှူံးနိမ့်ပြီး Carnage ကို Ravencroft ကိုထိန်းသိမ်းထားခဲ့ရပါတော့တယ်။
New Carnage (Carnage II)
Ravencroftဟာ Cletus Kasadyတစ်ယောက် အစောင့်အကျပ်အပြည့်နဲ့ထိန်းသိမ်းခံနေရချိန်မှာ Venom ကCletus Kasady ဆီသို့ ထပ်မံသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
Cletus Kasady ကိုစောင့်နေတဲ့အစောင့်စစ်သားတွေအကုန်လုံးကိုသတ်ပြီး Cletus ကိုယ်ထဲမှ Carnage Symbioteကိုဆွဲခွာပြီး စားပစ်လိုက်ပါတယ်။ Venom ရဲ့ Web ဖြစ်တာကြောင့်အလွယ်တကူပဲစားသောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Cletus Kasadyမှာ Carnage မရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်း လက်မလျော့ခဲ့ပါဘူး။ Carnage ဟာ ထောင်ကားမှောက်မှက‌နေလွတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ သူ့တစ်ကိုယ်လုံးကို Red Paint တွေချယ်ပြီး Carnage ပါဆိုပြီး publicမှာအော်ဟစ်နေခဲ့ပါတယ်။ Spideyကပဲလာရောက်တာဆီးပြီးဖမ်းခဲ့ရပါတယ်။
နောက်တစ်ကြိမ် Cletus ထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာတော့ Spidey နဲ့ အတူ Negative-Zone ဆိုတဲ့ Dimensionထဲကိုရောက်သွားပါတယ်။ထို Negative Zone ဟာ ဖျက်စီးအားအလွန်ပြင်းကြီးအင်အာကြီးတဲ့ Blastarr ဆိုတဲ့ Villain ကြီးက Earth အပါအဝင်အခြားသော Planet တွေကိုဖျက်စီးသုတ်သင်ဖို့ စစ်တပ်ကြီးကိုတည်ဆောက်နေခဲ့ပါတယ်။
Spidey Negative-Zone ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ Costume အသစ်ကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ Negative Zone ရဲ့ side effectတွေပါပဲ။ ဘယ်အရာမှ အတည်တကျမရှိပါဘူး။
Cletus Kasadyက‌တော့ Blastarr ကို Spideyကိုသတ်ဖို့ကူညီပေးမယ်ပြောခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အာရုံခံမှုကြောင့် Negative-Zone ရဲ့မြေကြီးတစ်နေရာမှာ မြုပ်နေတဲ့ Symbiote ထည့်ထားတဲ့ Box ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ထို Box ကိုယူပြီး Symbioteကိုကပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ Carnage ဟာထပ်မံပြီးမွေးဖွားလာခဲ့ပြန်ပါပြီ။
Carnage II လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Spdieyက‌တော့ Blastarrနှင့်သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကို ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ထူးဆန်းတဲ့ မျိုးနွယ်တွေ စက်ရုပ်တွေ အများကြီးရှိနေတဲ့ စစ်တပ်ကိုပါ။ Blastarrရဲ့ Heavy Blastarr ကြီးကို Carnageက လူတွေအများကြီးကိုထပ်သတ်မှာကိုသဘောမကျလို့ဖျက်စီးခဲ့ပြီး Spdiey နဲ့ Carnage တို့ဟာ Blastarrကိုချခဲ့ပြီး Negative-Zone ကနေ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။
Spdiey နှင့် Carnage တို့Earth ကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ Cletus Kasadyကို ရဲများကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်ထဲမှာ Carnage ကပြန်လည်ကိန်းအောင်းနေပါပြီ။
Symbioteတွေရဲ့ ထုံးစံ Genetic အရ မျိုးပွားဖို့အတွက် အချိန်တစ်ခုရောက်လာရင် မျိုးဆက်သစ် Symbioteအသစ်တစ်ကောင်ကို မွေးထုတ်ပေးရပါတယ်။
Venom ရဲ့ Web ကနေ Carnage ဖြစ်တည်လာသလို Carnage ကနေလည်း Symbioteအသစ် တစ်ကောင်ဟာမွေးဖွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။Symbiote တွေဟာ လိင် အတိအကျမရှိပါဘူး။ Venom ဟာ Carange အတွက်အဖေဆိုလည်းဟုတ်ပါတယ်။ အမေဆိုလည်းဟုတ်ပါတယ်။
ဒီတော့ Asexual ‌‌ပေါ့။ Carnage သာ Breeding ဖြစ်နေတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါ Venom ကလာခေါ်ပါတယ်။ Carnage က သူ့အနေနဲ့ Symbioteအသစ်ကိုမွေးဖွားချင်ပါဘူး။အဖြေကတော့ရှင်းပါတယ်။ သူ့လိုအဖေပြန်ကိုက်တဲ့ကောင်ဖြစ်မှာစိုးနေတာပါ။
ဒါကြောင့် Venom က Carnageကို Symbioteအသစ်မွေးဖွားဖို့ပြောတာကိုလက်မခံပဲရှောင်တိမ်းနေခဲ့ပါတယ်။ Venom ကတော့ တကယ်လို့ သူ့သား Carnage ကနေပြီးတော့ မြေးလေးမွေးထုတ်ပေးရင် နာမည်ပါကြို‌ပေးပြီးသားပါတဲ့။ နာမည်ကတော့ Toxin ပါပဲ။
Toxin သာမွေးဖွားလာရင် Toxin ကို Venom ကသူနှင့်အတူ မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီး Spideyလေးကို နှစ်ကောင်ပေါင်းသတ်ဖို့ပါပဲ ။
Black Cat ဟာလည်း Carnageကရဲဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကို Toxin Web ကပ်ဖို့ဖမ်းနေတာကိုသွားရောက်ကာကွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာသော Carnageရဲ့ Web မှတစ်ဆင့် ရဲသားထံကို Toxin Web များကပ်ကာ Host အဖြစ်အသုံးချပြီး Symbiote အသစ်အနေနဲ့ Toxinဟာအောင်မြင်စွာမွေးဖွားလာခဲ့ပါတော့တယ်။
ထိုရဲအရာရှိရဲ့နာမည်ကတော့ Pat Mulligan ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Toxin ဟာမွေးမွေးပြီးချင်မှာပဲ Host ကပြီး Carnage ကိုချပါတော့တယ်။တကယ်၍များ Carnage ကသူ့အဖေဆိုရင် အမေကဘယ်မှာလဲ မေးပြီးချတာပါ။
Carnageလည်းပြန်ချပေမဲ့ New Born Symbioteတွေဟာ ကြမ်းနေတော့မနိုင်ပါဘူးCarnage လည်းဆက်မချပဲရှောင်သွားခဲ့ပါတယ်။
ရဲအရာရှိဟာ သူ့ကိုယ်ထဲမှာ Toxin ရှိ‌နေသေးတာကိုသတိထားမိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Cletus Kasadyနောက်ကိုနောက်ယောင်ခံလိုက်ပြီး သတ်ဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီရဲအရာရှိဖြစ်သူဟာ ရဲစဝင်ကတည်းက လူတစ်ခါမှမသတ်ဖူးသူပါ။ Carnageကို အနိုင်ရပြီး သတ်လုနီးပါးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ မသတ်ပဲ ပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။
Pat မှာသားနဲ့မယားလည်းရှိပါတယ်။ Toxin ကြောင့် သူ့မိသားစုတစ်ခုခု ရန်စွယ်တွေရှိလာမှာလည်းစိုးရိမ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်တစ်လှမ်းကနေလည်း Toxin ကိုအသုံးချကာ Spider-Man ကဲ့သို့ crime တွေကို ဖြေရှင်းပေးနေပါသေးတယ်။
Toxin ကို Black Cat နှင့်အသုဘတစ်ခုသွားနေတုန်းမှာ Venom နှင့် Carnage ကဝင်တိုက်ပါတယ်။ အဓိကက တော့ Toxin ဟာသူတို့ race ထဲမှာ အတော်ကိုစွမ်းအားကြီးပြီး သန်မာတဲ့ symbioteဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ထိန်းကျောင်းမှုမှားရင် symbioteတွေအတွက် ရန်သူဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်လို့ပါပဲ။ စစကတည်းက ပုံစံသွင်းချင်တာပေါ့။
Spider-manကလာရောက်တားခဲ့ပြီး pat ကိုကယ်ပြီး နှစ်ယောက်ပေါင်းတိုက်လိုက်ပါတယ်။Carnage နှင့် Venom လည်းနောက်ဆုတ်သွားရတာပေါ့။
နောက်ရက်ညမှာပဲ Pat ဟာ မိန်းမနှင့်သားကိုစွန့်ပစ်ခဲ့ပြီး ထွက်ဖို့လုပ်ပါတော့တယ်။
သူ့ရဲ့ ကိုယ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ Toxin ကိုအသုံးချလေ့လာပြီး ကောင်းတာတွေအတွက်အသုံးချဖို့တွေးထားခဲ့တာပေါ့။
Venom နဲ့ Carnageတို့က ကိုယ့်ကလေးကိုယ်တောင်မနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ xD
New Avnegers Timelineတွင် Scarlett Witchတစ်‌‌ယောက်ကြောင့် Avnegersတစ်ချို့သေဆုံးခဲ့ပြီး တခြားသော Avengersတွေဟညလည်း ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Avnegersအဖွဲ့အသစ်ဖြစ်လာပြီး Super Villainတွေကို တိုက်ခိုက်ပါတယ်။
Carnageကတော့ ထို‌comic မှာ Sentry မှ space ထဲသို့ဆွဲခေါ်ပြီး နှစ်ခြမ်းဆွဲဖြဲသတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း Carnageဟာမ‌သေဆုံးခဲ့ပါဘူး။Cletus Kasadyဟာလည်းမသေခဲ့ပါဘူး။ Sentry လို powerful being တစ်ယောက်ကို ရှုံးနိမ့်တာတော့အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။
Carnageရဲ့ Body ဟာ Space ထဲမှာလွှင့်နေချိန်မှာပဲမထင်မှတ်ထားတဲ့ကယ်ဆယ်မှုတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်။Iron Man နှင့် ခေတ်ပြိုင် စမ်းသစ်တီထွက်သူတစ်‌ယောက်လို့ပြောလို့ရတဲ့ Michael Hall ဆိုတဲ့ သူက ကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Michael Hall တွင် Hall Industriesရှိပြီး ထို Industries မှတစ်ဆင့် legal ရော illegal ရောစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ပါတယ်။ Michael Hall ဟာ Carnageရော Cletus Kasady တို့ကိုပါspace ထဲ Sentryသတ်ပြီးထားခဲ့ချိန်မှာကယ်ဆယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ထို့နောက် Carnageရဲ့ Symbiote Web တွေကိုအသုံးချပြီး Iron Rangersအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။
Iron Rangers အဖွဲ့ရဲ့ armored တွေကတော့ Biochemical Armor တွေဖြစ်ပြီး Carnageရဲ့ Web တွေကနေဖဲ့ယူပြီး living armor ဖြစ်နေပါတယ်။
Member တွေကတော့ Royal Blue , Fire Brick, Paris Green , Burnt Orange , Gun Metal တို့ပဲဖြစ်ပြီး အရောင်မတူ , Abilitiy တူတဲ့ armor တွေကို ဝတ်ဆင်ကြပြီး Michael Hall ကိုကာကွယ်ကြပါတယ်။
Spidey နှင့် Iron Man တို့နှစ်ယောက်ဟာ Doppelganger ဆိုတဲ့ Man-Spider နောက်ကိုလိုက်ရင်း ရဲ့ doctor Tanis နဲ့တွေ့ပြီးနောက်မှာ Man-Spider ကို Royal Blue ကပစ်လိုက်တာကြောင့် မတော်တဆ Doctor Tanis ဟာလက်ပြတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Michael Hall ဟာ နည်းပညာကုထုံးနဲ့အတူ လက်အသစ်ကိုအစားထိုးပေးခဲ့ပါတယ်။
Iron Man နဲ့ Spideyဟာ hall Industries ကို ‌ခြေရာခံလိုက်နေခဲ့ပြီး doctor Tanis ကို Michael Hallကခေါ်ယူထားပါတယ်။ မထင်မှတ်ပဲ Carnageဟာ Hall Industriesထဲမှ လွ‌တ်မြောက်သွားခဲ့ပြီး doctor Tanis ကိုကပ်ခဲ့ပါတယ်။ Spideyနှင့် Iron Man , Armor Rangers တွေက Carnage ကိုတားဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Carnageဟာ Doctor Tanis ကို Host လုပ်၍အသုံးကာ မူလပိုင်ရှင် Cletus Kasadyထံသို့ထပ်မံရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတော့တယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း Doctor Tanis ရဲ့လက်ထဲကို symbiote infectionဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ Carnage ရဲ့ web ကစိမ့်ဝင်‌နေပြီး symbio-prosthetic hand ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ Carnage ရဲ့ offspringအဖြစ်မခံချင်တာနဲ့ ကိုယ့်လက်ကိုယ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
Symbio-prosthetic hand ကိုတော့ Carnage ရဲ့ Girlfriendဖြစ်တဲ့ shriek ကယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာလည်း Carnage ဟာ Armor Rangers တစ်ဖွဲ့လုံးကို သူ့ရဲ့web တွေနဲ့ချဉ်ကပ်ပြီး heavy tech-symbio armor အသွင်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ size ကကြီးပြီးတော်တော်သန်မာတဲ့ ပေါင်းစပ်မှုပါ။ armor Rangers တွေကတော့သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ထို Carnage Verisonကို Mass Carnage လို့ခေါ်ပြီး Symbioteနဲ့ Tech armor ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ heavy verisonပဲဖြစ်ပါတယ်။
Mass Carangeရဲ့ Targetက Michael Hallပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ web တွေကို permissionမပါပဲယူသုံးခဲ့တာကြောင့်အတော်ကိုဒေါသထွက်ပြီးသတ်ချင်နေတာပါ။
Spideyနှင့် Iron Man တို့ကတားဖို့လုပ်ကြပါတယ်။ Mass Carnage က တော်တော်အကောင်ကြီးပြီးမာတော့ နိုင်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။
Carangeရဲ့ Girlfriend Shriek ဟာ Doctor Tanis ဆီမှ ပြတ်နေတဲ့လက်ကိုယူထားပေမဲ့ carnage ရဲ့ offspring Symbioteဟာ doctor Tanis ဆီကိုပြန်လည်ရောက်သွားပြီး. New Born Symbioteအသစ်ဖြစ်တဲ့ Scorn ဆိုတဲ့ Symbiote ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
Shriek ရဲ့ Scream Abilitiesကို ညှပ်ပြီးအသုံးချကာ Carnageကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Carnageဟာ ‌သေစေနိုင်တဲါ အသံလှိုင်းတုန်ခါမှုကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ mass Carange armor ကတော့ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက်မှာ Doctor Tanis ဟာလည်း Symbioteအသစ်ရရှိထားခဲ့ပြီး Carnageဟာလည်း Michael Hall ကိုသတ်ဖို့ အချိန်ကောင်းကိုစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။
Carnageရဲ့ Abilitiesတွေက အခြား Symbioteတွေနဲ့ တူပေမဲ့ ပိုမိုသာလွန်နေပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ Abilitiesတွေများစွာရှိနေပါတယ်။
Host ဖြစ်သူ Cletus Kasady ကိုယ်တိုင်ဟာလည်း ကြမ်းတမ်းတဲ့ လူသတ်သမားဖြစ်နေတာကြောင့်လည်းပါပါတယ်။
Symbiote တွေရဲ့ Abilities အနေနဲ့ Superhuman Speed, Superhuman Strength, SuperHuman Stamina , Superhuman Agility , Sueprhuman Durabilityအစသဖြင့် superhuman စွမ်းအားတွေကို Host ဖြစ်သူကိုပေးပါတယ်။
Weapon Shaping – Carnage အနေနဲ့သူ့ရဲ့ Skin ကိုချွန်ထက်မာကြောတဲ့ bio weaponများအဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ဓားပုဆိန် အစရှိတဲ့လက်နက်ပုံစံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Symbiotie ဟာတခြားသော အရာတွေပုံစံများစွာကိုလည်းပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။
Spideyတောင်ရှောင်ရခက်တဲ့ stuff တွေပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ weapon shape ပြောင်းထားတဲ့ လက်နက်တွေဟာ carnage ကိုယ်မှ ခွာလိုက်ရင်အမှုန်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။
Webbing – Spidey နှင့် Venom တို့လိုပဲ Carnageဟာ Web တွေထုတ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် Carnage တိုက်တွေကိုခုန်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်။ organic web တွေဖြစ်ပြီး ထိမိရင်ရုံးရခက်ပါတယ်။
Regenerative Healing Factor – Symbioteတွေရဲ့ Healingကတော့ အရမ်းကောင်းမွန်ပါတယ်။ Carnageအနေနဲ့ ကြီးမားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုတွေ ဒဏ်ကိုကောင်းမွန်စွာခံနိုင်ပြီး သေနိုင်တဲ့ တိုက်ခိုက်မှု‌တွေကနေလည်း လွတ်မြောက်တာပေါ့။ host ဖြစ်သူကို healing ဖြစ်ပေးသလို သူကိုယ်တိုင်အတွက် Regenerate လုပ်ပါတယ်။
Spider-manရဲ့ Spider Scene ဟာလည်း Carnageအပေါ်မှာမကြုံးမဝင်ပါဘူး။ နောက်ထပ်အားသာချက်ကတော့ Carnage ဟာ သူ့ရဲ့ area မှာ အခြား Symbioteတွေရှိနေရင်ချက်ချင်းတန်းသိပြီးအာရုံခံနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ Carnage ဟာ Cletus Kasadyရဲ့သွေးကတိုက်ရိုက်ဆင်းသက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် Cletus Kasady မသေမချင်း Carnage ဟာ Host ဆီမှာကပ်နေလို့ရပါတယ်။ Carnage Web တွေကိုဖျက်စီးလိုက်ရင်တောင်မှ Cletus Kasady ရဲ့ သွေးထဲမှာ CARNAGEကရှိနေပါသေးတယ်။
New Avnegersတွင် space ထဲတွင်အချိန်အတော်အတန်ကြာအောင်သေဖို့နီးနီးဖြစ်နေခဲ့တာတောင်မသေဆုံးခဲ့ပါဘူး။
Mass CARNAGE မှာတုန်းကလည်း Symbioteတွေနှင့် ပြုလုပ်ထားတဲ့ Armor Rangers suit တွေအကုန်လုံးကို Absorbing လုပ်လို့ရကြောင်းပြခဲ့ပါတယ်။
Carnage ဟာသူ့ရဲ့ size ကိုလည်းကြီးချင်သလိုကြီးလို့ရပါသေးတယ်။ Strengthကတော့ တော်တော်သန်မာတာမလို့ Size ကို Agilityနှင့် Strengthတို့နှင့်ထိန်းချုပ်ပါသေးတယ်။
Symbiotic Expansion and Psychic Control-ဒီ စွမ်းအားကတော့ Carnageရဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့ Abilitiy ပါပဲ။ Carangeဟာ သူ့ရဲ့ web တွေကိုဖြန့်ပြီး အခြားသူတွေကို psychic controlလုပ်ပြီး ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ Carnage U.S.A Event တွင် Carnage ဟာ မြို့ငယ်လေးတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ လူတွေအကုန်လုံးကို controlလုပ်ခဲ့ပြီး Avnegersများပါ ထိန်းချုပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
Carnage ဟာ electricity ဓာတ်ကိုလည်းခံနိုင်တယ်။
ဒါဟာ Carnage ရဲ့ Abilities အကုန်မဟုတ်သေးပါဘူး။ Darkhold ကြောင့် Symbioteတွေရဲ့ weaknessဖြစ်တဲ့ မီးနဲ့ sonic wave တွေကိုခံနိုင်တာတွေရှိပါသေးတယ်။
အခု Abilitiesတွေကတော့ Carnage အခုရေးထားတဲ့ Event တွေထဲမှာ သုံးပြခဲ့တဲ့ Abilitiesတွေပဲရှိပါသေးတယ်။
Part-2 မှာပိုမိုကြမ်းတမ်းတဲ့ Abilitiesတွေကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။
Hall Industriesရဲ့ Armor Rangersတွေဟာ Carnage ရဲ့Web ကနေ suit တွေဖန်တီးထားခဲ့တာပါ။
Michael Hall ဆိုတဲ့ တီထွင်သူကပိုင်ဆိုင်ပြီး tony stark နဲ့ခေတ်ပြိုင်တီထွင်သူတစ်ဦးပါ။
အခုပုံမှာ ပါတဲ့ armor Rangersနှစ်‌ယောက်က Royal Blueနဲ့ Burnt Orangeတို့ပါ။
ဒီ Armor Rangersတွေဟာ Superior Iron Man ရဲ့ Endo-Sym Armor ထက်တောင်စောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Cletus Kasady ဟာ Michael Hall တို့စီကလွတ်မြောက်ပြီးကတည်းကအခြေတကျမရှိပဲလျှောက်သွားနေခဲ့ပါတယ်။
ဒီcomicကတော့ comic fan တွေကိုအံ့ဩမှင်သက်မှု‌တွေနဲ့အတူဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ comic တစ်ခုပါပဲ။
Cletus Kasady ဟာ Coloradoဆိုတဲ့မြို့ငယ်လေးကို တစ်ယောက်တည်း web တွေနှင့် controlလုပ်အသုံးချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Webထိပြီး mind controlပါပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ကလေးလူကြီးအကုန်ပါပါတယ်။
ဒါကြောင့် U.S emergency response centerမှ Avengers နှင့် အခြား လူစွမ်းကောင်းများကိုခေါ်ကာ Carangeကို နှိမ်နှင်းဖို့‌စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။
Spidey, Wolverine, Captain Thing , Hawkeye တို့ဟာ Carnageဆီသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ Carnageဟာ သူတို့မရောက်ခင်ကတညက မြို့မှာရှိတဲ့လူထောင်သောင်းဂဏန်းကို mind controlလုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
ရောက်လာချိန်မှာလည်း Hero တွေအကုန်လုံးကိုပါ web တွေနဲ့ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီး Controlလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ spideyတစ်ယောက်သာ လွတ်ခဲ့ပါတယ်။
Spdieyကလည်း Carnage controlအလုပ်မခံရသေးတဲ့လူတစ်ချို့နဲ့အတူရှောင်တိမ်းနေခဲ့ရပါတယ်။ Carnageကိုနှိမ်နင်းဖို့ U.S governmentမှ Symbiote တွေဖြစ်တဲ့ Scrion, Hybrid , Agent-Venom တို့ကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီး ‌Carnage ကိုနှိမ်နင်းရန်စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ Hybridက‌တော့ Symbiote လေးကောင်ရဲ့ web တွေပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပြီး lasher (war dog), phage , Agnoy ,Riot တို့ရဲ့ web တွေကိုချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ special group နဲ့စစ်သားတစ်စုပဲဖြစ်ပါတယ်။
Scrionက‌တော့ Carnageရဲ့ ကလေးပဲဖြစ်ပြီး Cybernetic Symbiote ဖြစ်ပြီး အစွမ်းဖက်ပါတယ်။ သူမရဲ့ Abilitiyထဲကထူးခြားချက်ကတော့ weapon shapingကို ပစ်ခတ်လို့ရတဲ့ စွမ်းအားနည်းပညာ လက်နက်တွေပြောင်းလဲနိုင်တာပါပဲ။
သူတို့တွေအကုန်ပေါင်းပြီးတိုက်မှ Carnage ဟာလည်း တိုင်ပတ်တော့တာပါ။ hero တွေ mind controlခံရတာတွေလွတ်လာခဲ့ပါတယ်။ Carnageနဲ့ Agent-Venom တို့နှစ်‌ယောက်ချနေကြတုန်းမှာ အခြားသူတွေကလည်း မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ carnage web ဖြန့်ထားတဲ့ လူတွေကိုထိန်းဖို့လုပ်နေရတာပါ။
အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးနှိမ်နင်းမှသာ Carnage ကျရှူံးခဲ့ပြီးအထိန်းအသိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။
တစ်မြို့လုံးကို mind controlလုပ်ပြီး hero တွေပါမချန်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာပါ။ Hybrid နဲ့ Agent-Venom, Scrionတို့တူတူပေါင်းတိုက်မှပဲ နိုင်‌တော့တာပါပဲ။
Carnageဟာ အမြဲလိုလိုထွက်ပြေးနေကျဖြစ်တာကြောင့်ဒီတစ်ခါလည်း ထပ်မံလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့ အစောင့်တွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထားထားတဲ့ Maximum Security Prison ကနေကိုမှလွတ်မြောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
Carnageလွတ်မြောက်သွားတဲ့အတွက် Agent -Venom ဟာ Maximum Security Prisonသို့ရောက်လာပြီးအခြေအနေများကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ Carnage လွတ်မြောက်ပြီး နောက်မှာ Scarlet-Spider ဟာလည်း Carnage နောက်ကိုလိုက်နေခဲ့ပါတယ်။
Carnage ဟာ Criminal Gang တစ်ခုကို Ally လုပ်ပြီး Lyndon B Johnson Space Center ကိုသွားရောက်ပြီး Microverse ကိုသွားဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ Scarlet-Spider နှင့်ချတဲ့အခါ Scarlet-Spider နဲ့မတွေ့ဖူးပေမဲ့လည်း Peter Parker မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို အာရုံကနေသိနေခဲ့ပါတယ်။
Scarlet Spider တားဖို့လုပ်တာတောင် Carnageဟာ Microverseကိုအောင်မြင်စွာထွက်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Microverseထဲရောက်တော့လည်း Carnageဟာသူနဲ့အတူပါလာတဲ့ Ally တစ်ဖွဲ့လုံးကိုရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ Scarlet Spider နှင့် Agent-Venom ဟာလည်း Microverseထဲကိုလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။
Microverse ထဲမှ space ထဲမှာ Agent-Venomက Researchလုပ်နေခဲ့ပြီး Scarlet Spider ကတော့ On Ground အနေနဲ့ Carnage ကို လိုက်ရှာနေခဲ့ပါတယ်။
Carnage Microverseထဲကိုလာရတဲ့အကြောင်းအရင်းက Microverseထဲမှ Master တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Marquis Radu ကို တွေ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
Microverseထဲမှာလဲ Microverse Empire တွေဖြစ်တဲ့Endeavor နှင့် Marquis Radu ရဲ့ စစ်တပ်တွေဟာ တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။space war ကြီးအကြီးကျယ်ဖြစ်ပွားနေပြီး Agent-Venom ဟာလည်း Endeavor များဖက်ကကူညီတိုက်ခိုက်ပေး‌ခဲ့ပါတယ်။
သိပ်မကြာခင်မှာပဲ Marquis Radu ဟာ Carnageနှင့် Agent-Venom တို့ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ Scarlet Spider ကတော့ လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ Redeemer ဆိုတဲ့ God တစ်ပါးက Scarlet Spider ကိုခေါ်ထားပါတယ်။
Marquis Radu ဟာ Agent-Venom နှင့် Carnage တို့ရဲ့ Web များကို ပွား၍ hostများစွာကို ကပ်စေခဲ့ပါတယ်။ Symbiote ဟာ Microverseအတွက် ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အရာဆိုပေမဲ့ Marquis Raduဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ Symbioteကပ်ထားတဲ့ စစ်တပ်ကြီးကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။
Marquis Raduဟာ Microverseထဲမှာ Symbiote Spreading ဖြစ်ရင် normal world မှာရှိတဲ့ Micro တွေလည်းပြန့်ပွားပြီး လူသားတွေအကုန်လုံး Symbioteတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာသိနေခဲ့ပါတယ်။
Carnageကလွတ်မြောက်သွားပြီး Microverseမှထွက်ပြီး Normal Worldမှာစစ်တပ်ကြီးတစ်ခုဖန်တီးပြီး အသက်ပေါင်းများစွာကိုရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
Agent-Venom နှင့် Scarlet Spider တို့ဟာလည်း Microverseထဲမှထွက်ပြီး Carnageနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Micro Effectကြောင့် size များနှာမူမမှန်ပဲသေးနေခဲ့ပေမဲ့ Normal Size ပြန်လည်ရရှိတဲ့အခါမှာ agent-venom က Scarlet Spider Carnageကိုသတ်မှာမလိုလားပဲ Undiclosed Containment facilityတစ်ခုမှာ ပိတ်လှောင်ထားခဲ့ပါတယ်။
Agent-Venom ဟာလည်း တစ်နည်းနည်းနဲ့ထွက်ပြေးဦးမှာကိုသိနေခဲ့ပါတယ်။
Superior Spider-man ကိုတော့လူတိုင်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။အထူးတလည်မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုပါဘူး။Peter Parker Body ကိုယူထားတဲ့ Doctor Octopusပါပဲ။ Superior Spider-manလို့ခေါ်ရလောက်အောင်ကြမ်းတမ်းတဲ့ Verisonဖြစ်ပါတယ်။
Stark Industriesကဲ့သို့ Parker Industriesရှိပြီး ထို Industryများမှာ အဆင့်မြက်လက်နက်တွေ tech တွေ ကိုထုတ်ပါတယ်။
Spider-Army ဆိုတဲ့စစ်တပ်ကိုဖွဲ့စည်ထားပြီး New York တစ်မြို့လုံးက Villain တွေပြားပြားဝပ်အောင်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ Spdiey ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Agent Venom မှာ Carnageကိုထောင်ထဲမှာချထား‌ခဲ့ပေမဲ့ Frightful Four Super Villainအဖွဲ့မှ Prison Break လုပ်ကာ ခေါ်ဆောင်ဖို့လုပ်ပါတယ်။ Wizard ဆိုတဲ့ Super Villain မှာ ဘယ်သူ့ကိုမဆို Mind Controlလုပ်နိုင်တဲ့ စွမ်းအားရှိပါတယ်။
Carnage ကိုလည်း Mind Controlလုပ်ပြီး အသုံးချဖို့ ကြိုးစားပေမဲ့ ဦးနှောက်မရှိတဲ့ Carnage ကို Mind Controlလုပ်ဖို့ခက်ခဲနေခဲ့ပြီး သူပါအသတ်ခံရတော့မလို့ပါ။
Frightful Four အဖွဲ့မှာ Klaw/Master Of Sound Super Villainမှ Carnageကိုအလွန်ပြင်းတဲ့ အသံလှိုင်းများထုတ်လွှင့်မှပဲWizard လည်း လွတ်သွားပြီး လဲကနေတဲ့ Carnageကို ထောင်ထဲမှကယ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက် Carnageကို Wiard မှ သူ့ရဲ့အခိုင်းအစေအဖြစ်အသုံးချဖို့အတွက် Symbioteနှင့် Host ကိုခွဲပြီးယူဖို့လုပ်ပါတယ်။
Wizard နားလည်လိုက်တာက Symbioteကအသိညဏ်ရှိပြီး Cletus Kasadyက ကြောင်နေတာကိုပါပဲ။
wizard သူ့ရဲ့ Helmetနှင့် CARNAGEကို Mind Control လုပ်ဖို့အတွက် Frightful Four ရဲ့နောက်ထပ် memberတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Dr.Karl Malus ဆိုသူကို အသုံးချခဲ့ပါတယ်။
Cletus Kasady ဆီမှ Carnage ကိုသွေးမှတစ်ဆင့်ကူးစေခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် superior Carnageဆိုပြီး ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း madness villainကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
Wizard , Superior Carnage , Klaw တို့အဖွဲ့ဟာ New York တစ်မျိုးလုံးဖျက်စီးပြီး သတ်ဖြတ်နေပြီး မြို့တော်ဝန်ကိုပါသတ်ဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Superior Spider-manနှင့် သူ၏ အစောင့်အရှောက်စစ်သားများကလာရောက်ကာကွယ်ပေးခဲ့ပြီး Carnageကို Dr.Karl ထံမှဆွဲခွာပစ်ခဲ့ပေမဲ့ Wizardကိုထပ်မံပူးကပ်ပြီး တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ CARNAGE ကို Spider-man ကဖမ်းဆီးပြီး Wizardကိုလည်းအနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက်မှာတော့ spider-manဟာ Carnageနှင့် Cletus Kasadyကိုသပ်သပ်စီထပ်မံခွဲထားခဲ့ပါတော့တယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း Carnage ဟာ Spider-Island မှလွတ်မြောက်ပြီး Host များစွာတစ်ဆင့်စီ ကူပြောင်းပြီး Cletus Kasady ရှိတဲ့ထောင်ကို မရမကသွားပြီး ထပ်မံပြီး Carnageတစ်ကြိမ် ကြမ်းပါတော့တယ်။ ထောင်တစ်ခုလုံးကိုသတ်ပြီး ထွက်ပြေးလွှတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
အစုလိုက်အပြုံလိုက်လူသတ်မှုတွေသတင်းကို Deadpoolသိသွားတဲ့အခါမှာတော့ Deadpoolရဲ့ Targetက Carnageဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
Carnageတစ်ယောက်ရဲ့ info တွေကိုစုံစမ်းပြီး လူသတ်ပြီးနှပ်နေတဲ့ Carnage ကို သွားပြီး သမပါတော့တယ်။ လာလာချင်းကို Rocketနဲ့ထုပြီး Carnageကိုသမပါတယ်။နှစ်ကောင်လုံးကငကြမ်းတွေဆိုတော့ သွေးထဲအလူးလူးနှစ်ယောက်ချနေပြီး Deadpoolက Carnage ကိုဖောက်ခွဲပြီး သတ်ခါနီးမှာ Carnage ရဲ့ Girlfriend ဖြစ်တဲ့Shriek ကရောက်လာပြီး Deadpoolမျက်နှာကို ဖျက်စီးလိုက်ပါတယ်။
Carnage က Deadpoolကိုသတ်ခါနီးမှာ Deadpoolက loud speaker ခါးမှာအသင့်ချိတ်ထားတာကြောင့်ဖွင့်ပြီး Carnage ကြီးသောကတွေပေးပါတော့တယ်။ Shriek မှ Carnageကို ကယ်ပြီး Deadpoolကိုထားခဲ့ပြီးပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။
Carnageဟာ Deadpoolကိုအာရုံကောင်လို့သတ်မှတ်ထားပြီးတော်တော်မုန်းနေတာပါ။ သူရှိတဲ့အရပ်မှာကိုမနေချင်လို့ Shriekနှင့်အတူ တခြားနေရာရွေ့ပြောင်းပါတော့တယ်။
Deadpoolကလည်း နောက်ကနေလိုက်ပြီးရှယ်ကိုသောကတွေပေးတာကြောင့် Deadpoolကို မင်းစကားမများပဲ ချလို့မရဘူးလားဟူ၍ပါပြောယူရပါတယ်။
Deadpoolကို ထောင်ချောက်ဆင်ပြီး Carnageဟာအစိတ်စိတ်ပိုင်းပြီးထားခဲ့ပါတယ်။ combat သာပေမဲ့ Strengthချင်းကျကွာတော့ Deadpoolမနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ Deadpoolအပိုင်းပိုင်းပြတ်နေချိန်မှာ Hybrid Symbioteက Deadpoolကိုလာကပ်ပြီး Symbiote 4ကောင်ရဲ့စွမ်းအားကိုရရှိပြီး Carnage နှင့် တန်းတူစွမ်းအားရရှိသွားပါတယ်။
Deadpoolဟာ Carangeနဲ့ သူ့ရဲ့ Girlfriendကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးမှာ Carnageရဲ့ Girlfriendကိုသတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ Carnageလည်း ကောင်မလေးသေသွားတော့ Depressဖြစ်ပြီး သူ့စိတ်ကိုသူ ပြုပြင်ဖို့ သူကိုယ်တိုင်ပဲ အဖမ်းခံပြီး အချိန်အတော်အတန်ကြာအောင်ငြိမ်နေခဲ့ပါတယ်။
Don’t mess with ငပူး။
Carnage မှာ သူ့ရဲ့ offspringအနေနဲ့ Toxin နှင့် Scron ဆိုတဲ့ အကြမ်းစား Symbiote တွေရှိပါတယ်။
Toxin ကတော့ Carangeရဲ့ပထမဆုံး offspringဖြစ်ပါတယ်။
Scron ကတော့ ဒုတိယမြောက် Offspringဖြစ်ပါတယ်။
Carnage ရဲ့ web တွေကနေမွေးဖွားလာခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပြီး Symbioteတွေထဲမှာတော်တော်ကြမ်းပါတယ်။
Toxin ကတော့ Toxin ဆိုတဲ့အတိုင်း special Abilitiesအနေနဲ့ တော်တော်မြန်ပြီး မာ‌တဲ့ကောင်ပါ။
Scron ကတော့ Doctor Tanis ရဲ့အစားထိုးလက်ကနေမွေးဖွားလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး Cybernetic-Symbiote ဖြစ်ပါတယ်။
Special Abilitiesအနေနဲ့က သူ့ရဲ့လက်ကို blast weapon တွေ tech weapon တွေပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်။
နောက်ထပ် Carnageရဲ့ offspringဖြစ်တဲ့raze ဆိုတဲ့ Symbiote ရှိပါသေးတယ်။Carnage နှင့် Venom Familyအကြောင်းကို part2တွင်ထပ်မံဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။
Carnage ရဲ့ရှည်လျားလှတဲ့ ဘဝအကြောင်း part-1 ကတော့ ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။
သိပ်မကြာခင်မှာ ပိုပိုကြမ်းတမ်းတဲ့ part-2 ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Thanks for reading guys …
Suprise ဖြစ်စေရမယ်လို့ ကတိပေးလိုက်တဲ့ The Flash Director
No Comments on Suprise ဖြစ်စေရမယ်လို့ ကတိပေးလိုက်တဲ့ The Flash Director
The Suicide Squad (2016) မှာ DCEU အတွင်း စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Flash ဟာတော့ နောက်နှစ်မှာပဲ Solo Film ထွက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Flash film ဟာ Development ကာလအတွင်းမှာတင် Director အပြောင်းအလဲ Writer အပြောင်းအလဲနဲ့အတော်လေးကြာလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ရက်မှာပဲ DC FanDome ကနေ Reales Date နဲ့ Sneak Peek Teaser တစ်ခုထွက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပွဲတစ်ခုမှာတော့ The Flash ရဲ့ Director က ပရိတ်သတ်တွေစိတ်လှုပ်ရှားစရာ Suprise တွေမျှော်လင့်နိုင်မယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်။
” ကျွန်တော်တို့ Suprise တွေရှိတာကိုတော့ပြောပြနိုင်တယ်, ဘာတွေလဲဆို‌တာတော့ပြောပြလို့မဖြစ်ဘူး။ဒါပေမယ့် အဲ့ဟာတွေက ခင်ဗျားတို့ကိုတော်တော်လေးအံ့အားသင့်စေမှာတော့အမှန်ပဲ။ ပိတ်ကားပေါ်မှာ ခင်ဗျားတို့မမြင်ရသေးခင်အထိတော့ ဒီအရာတွေမသိသေးတာပိုကောင်းပါလိမ့်မယ် “
Ezra Miller ရဲ့ The Flash (2021) Film ဟာတော့ Director Andy Muschietti ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး 90s Batman ဖြစ်တဲ့ Michael Keaton, Ben Affleck, စတဲ့ သရုပ်ဆောင်ပေါင်းများစွာက သူတို့ရဲ့ Iconic Role တွေကနေပါဝင်လာကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Release Date ကတော့ November 4, 2022 ပဲဖြစ်ပါတယ်။